FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA SCHIPPERKE - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Schipperke
Ruck ny AKC Schipperke madio
Lisitry ny alika mifangaro Schipperke
Ny Schipperke dia kely ary indraindray faritana toy ny amboahaolo. Ny vatana dia toradroa amin'ny mombamomba azy. Rehefa tazana avy eo amin'ny sisiny ilay karandohany dia somary boribory kely ilay izy, somary tery manoloana ny vavony. Somary fohy kokoa noho ny halavan'ilay karandohany ny vava. Mainty ny orona kely. Mihaona amin'ny hety na manaikitra ny nify. Ireo maso kely lavalava dia miatrika ny lohany. Ny sofina miorina dia avo lenta ary misy endrika telozoro. Mivelatra ny tratra ary mahatratra ny kiho. Ny topline dia misavoana na mitongilana kely mankany ambadiky ny alika. Indraindray dia teraka tsy misy kambana izy io, fa raha ateraka miaraka amin'ny rambony dia ampidirina am-pitoerana amin'ny fotony hatrany amin'ny faran'ny tsy fahitana azy. Naoty: tsy ara-dalàna ny rambon'ny docking amin'ny ankamaroan'ny faritra eropeana. Matetika dia esorina ny lalàn'andriamanitra. Ny palitao matevina matevina dia fohy kokoa amin'ny tarehy, sofina, eo alohan'ireo forelegs sy hock. Ny palitao dia salantsalany amin'ny halavan'ny vatana ary lava kokoa amin'ny vozony, soroka ary rump. Ny lokon'ny palitao dia matetika amin'ny loko mainty matevina, izay ny hany loko eken'ny AKC, fa koa misy karazany maro karazana sy rongony izay eken'ny klioba sasany.
Alika kely malaky sy mavitrika ny Schipperke. Be zotom-po izy io, mailo ary matoky tena. Tena be fandavan-tena sy mahatoky, indrindra amin'ny ankizy. Tena mifamatotra amin'ny tompony izy io. Ny saka saka dia ho ekena am-pifaliana ary tsara amin'ny alika hafa izany matetika. Ny Schipperke dia tena marani-tsaina, liana am-po ary ratsy toetra. Ireo alika ireo dia mahomby amin'ny sambo. Anisan'ireo toetra tsara indrindra Schipperke ny fahaizana miaro ny tranony mpiditra an-tsokosoko —Miverina avy any tsy misy olona, ​​ary naman'ny ankizy tsara. Ny sasany mety ho sarotra tranom-bahiny . Fiaraha-miasa tsara mba hisorohana azy ireo tsy ho mailo sy tsy hanavakavaka ny olon-tsy fantatra. Mora fampiofanana satria marani-tsaina sy dodona ny hianatra. Matetika ny alika kely toy ny Schipperke dia mampivelatra ilay antsoina hoe Syndrome kely alika , ambaratonga samihafa amin'ny fitondran-tena entanin'ny olombelona , izay inoan'ilay alika fa misy azy mpitarika fonosana amin'ny olombelona. Rehefa alika alika manapaka ny trano , dia mety hiteraka olana amin'ny fitondran-tena, toy ny, saingy tsy voafetra ho, fiambenana , mibontsina, fanahiana fisarahana , mimenomenona, mikitika ary manaikitra mihitsy aza. Schipperkes avela handray an-tanana dia voalaza fa nanjary romotra, fanahy iniana ary niaro. Raha misy olona mitsidika vaovao, dia handray toerana mitily izy ireo ary hiezaka hiaro ny faritanin'izy ireo, na trano io na sombin-tany, manohitra ny tongotra roa sy ny tongotra efatra mpiditra an-tsokosoko . Mety ho lasa mpandehandeha mibontsina izy ireo rehefa manandrana milaza aminao ny zavatra tokony hataonao na manandrana ary MITENY NY hafa handao ny faritra misy azy ireo. Schipperkes dia te-hidradradradra. Aorian'ny hodi-kazo voalohany hampandrenesana anao dia mila ilazana azy ireo ampy dia ampy ary mangina. Schipperkes izay omena lalàna hanaraka, mametra izay izy ireo ary tsy avela hatao, miaraka amin'ny mpitarika fonosana tsy miovaova, ary isan'andro entana an-tongotra , dia tsy hampivelatra ireo fihetsika ratsy ireo. Ny alika efa namolavola azy ireo dia hiova ho tsara kokoa raha vantany vao mihaona ny sain'izy ireo.
Hahavony: 10 - 13 santimetatra (21 - 33 cm)
Lanja: 12 - 18 pounds (5,5 - 8 kg)
Hypothyroid, epilepsy, dysplasia hip sy sockets hip izay matetika mirona. Legg Calves Perthes, Progressive Retinal Atrophy (PRA), katarakta, ary aretina vao hita antsoina hoe MPS 111B (Mucopolysaccharidosis). Misy fitsapana genetika azo alaina ho an'ny MPS 111B amin'ny alàlan'ny Univ. an'ny Pennsylvania. Tandremo sao mamono be loatra an'io karazany io.
Schipperkes dia alika tsara amin'ny fiainana an-trano. Mavitrika ao an-trano izy ireo. Haingana be ireto alika ireto ary tsara raha manana tokontany mimanda.
spaniel akoho fotsy sy volontany
Ny Schipperke dia karazan'asa mavitrika sy tsy misy fanasatra. Mba hahasambatra sy hitoerana ara-tsaina dia mila entina isan'andro, lava izy ireo MANDEHANA na jogging. Ankafizin'izy ireo koa ny lalao sy ny fahazoana mihazakazaka. Ity karazana ity dia mihetsika be ao an-trano ary hahazo fampihetseham-batana be dia be manodidina ny tranonao. Hahafinaritra azy tokoa ny mihazakazaka afaka amin'ny fitarihana azy amin'ny tokotanin'ny vala na zaridaina voafefy.
Ankizy kely 3 ka hatramin'ny 7 eo ho eo
Ny Schipperke dia tena madio ary mitandrina tsara ny fikolokoloana azy manokana, fa kosa hitazonana ny palitao avo roa heny amin'ny toetr'andro, manosotra sy miborosy matetika amin'ny borosy mafy volo. Shampooina maina rehefa ilaina. Kely dia kely no nalatsan'izy ireo mandra-pahatonga ilay palitao 'hitsoka', izay mety in-3 isan-taona isaky ny vavy, ka tsy dia kely loatra ny lahy sy ny vavy mitelina, indrindra rehefa mihalehibe izy ireo. Ity fanovana palitao ity dia nilatsaka tampoka teo ambanin'ny palitao REHETRA tao anatin'ny 10 andro teo ho eo. Nilaza ny tompon-trano iray fa nanintona kitapo miantsena roa feno volo malefaka sy malefaka tamin'ny Schip 12 kilao aho! Hitako fa mora kokoa sy haingana kokoa ny manome azy ireo fandroana mafana noho ny fanerena ny palitao indroa na intelo mandritra ity herinandro ity (any ivelany foana!) Mba hanala ireo volo miraviravy sy mangidihidy alohan'ny handaozan'ny alika azy manerana ny trano. Ny mpampakatra iray dia afaka manao izany ho an'ilay olona tsy misy fanamainana fanamainana. Mitanjaka sy miboridana ara-bakiteny izy ireo mandritra ny 2-3 volana, miankina amin'ny fotoan'ny taona sy ny fotoana laniny any ivelany, mba hiverenan'ilay volo amin'ny akanjo marevaka vaovao. '
Ny Schipperke dia novokarin'ny kapitenin'ny lakandrano antsoina hoe Renssens. Izy io dia nidina avy tamin'ny zanak'ondry mainty 18 kilao, fantatra amin'ny anarana hoe Leauvenaar, izay mitovy amin'ny fiandrasana ondry Sheepdog belza niavian'ny. Ny Schipperke dia nihalehibe ary nihalehibe ary lasa karazana hafa tanteraka. Ny alika dia nanjary safidy ankafiziny hiambenana sambo lakandrano any Belzika. Ny fiompiana dia nampiasaina tamin'ny fiandrasana biby fiompy, lalao fihazana na fiambenana tsotra fotsiny ny faritra misy azy. Amin'ny teny Flemish, ny teny hoe 'schip' dia midika hoe sambo, ka nahatonga azy ireo no nahazo ny anarana hoe 'Schipperke.' Nahazo ny anaram-bosotra 'Little Captain' sy 'Little Skipper' izy ireo satria ny alika no 'ratter', asa tena lehibe eo amin'ny lakandrano lakandrano, ary matetika koa ny alikan'ny kapiteny. Ny karazany dia nanjary nalaza be tao amin'ny tokantrano belza tamin'ny faran'ny taona 1800. Niseho voalohany tamin'ny seho alika io tamin'ny 1880. Nanomboka tamin'izay dia naondrana nanerana an'izao tontolo izao. Schipperkes dia mahomby amin'ny sambo ary matetika ny olona no mahazo an'io karazany io hiaraka amin'izy ireo amin'ny dia an-tsambo sy amin'ny fanjonoana. Izy io dia mahatonga alika mpiambina lehibe rehefa miantsona amin'ny alina ny sambo, manaitra na inona na inona tsy ananan'ny mahazatra ary mankafy tsara ny diany ilay alika. Ny Schipperke dia neken'ny AKC tamin'ny 1904.
SCiPS = Schipperke Club an'ny Puget Sound
'Ity i Shade, Schipperke tamin'ny faha-3 taonany, ary izy no alika tsara indrindra nananako. Ny fianakavianay dia mitantana trano fandriana any South Dakota (Black Hills) mandritra ny fahavaratra, ary isan-taona dia miaraka aminay i Shade. Fantany ny fetrany ary mandany isan'andro mandehandeha eny an-toerana izy, mibontsina isaky ny misy fiara mivoaka, ary raha vao mivoaka izy ireo dia arahabain'izy ireo ary tarihiny ho eo am-baravaran'ny birao. Tena vahiny izy ary milalao amin'ny ankizy rehetra na dia tsy mbola nifankahita tamin'izy ireo aza izy, ary mandefitra amin'ny ekipa mihodinkodina rehetra. Rehefa manana afon-dasy aho dia lazaiko azy hoe 'Shade, mihirà hira ho anay' ary amin'iny fotoana iny dia hikoraka anao izy, izay mampihomehy ny rehetra. Masoandro izy, ary mbola tsy nahita zazalahy manan-tsaina sy mampiala voly kokoa aho! '
Kaontenera alika kely Schipperke — Centaur: the Pony & Schipperke Collector
Calua amin'ny faha-7 taonany
Tori sy ny rahalahiny Buddy amin'ny 3 volana
Tori the Schipperke mankafy izay tsara indrindra vitany, mitaingina sambo miaraka amin'ny dadany!
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Schipperke
Sary Schipperke 1
Sary Schipperke 2
st bernard afangaro amin'ny alika tendrombohitra bernese
sarin'ny alika an-tendrombohitra Swiss
amboadia amisy alika amina amidy amidy
boston terrier beagle mix amidy
sarin'alika mifangaro terrier